Iphupha ngeoyile ➡ Discover Discover online ▷ ➡️
I-Petroleum lulwelo olungenambala olutsalwe kwipetroleum. Ioli evuthayo inokuvelisa ukukhanya kunye nobushushu.
Iparafini idla ngokusetyenziselwa izibane. Kodwa inokusetyenziswa njengearhente yokucoca. Kungenxa yokuba inokususa ngokulula iintsalela ezinamafutha nezimdaka kwimiphezulu yesinyithi. Ngamanye amaxesha ulwelo lusetyenziswa njengesithambisi.
Kodwa kunokuthetha ntoni xa sibona ioyile ephupheni? Nguwuphi umyalezo onokuza nawo apha?
1 Uphawu lwephupha «ioyile» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ioyile» - ukutolikwa kwengqondo
3 Isimboli yephupha «Ioyile» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ioyile» - ukutolikwa ngokubanzi
Kubonwa ngokwembono ngokubanzi, umfanekiso wephupha weoyile unokuba ngu Yaziwa Yenza intengiso nomntu onomdla. Ndiyabulela kulomfowunelwa, unokufumana isimemo kwiqela elikhulu.
Ukubona kweoyile, umzekelo kwibhotile, kungabonisa ephupheni ukuba uya kudibana nomntu othi, nangona eluncedo kumcimbi othile, naye angathandeki. Lo mntu akukho lula ukujongana naye, kodwa oko kubonakala kuphela ngokuhamba kwexesha.
Nabani na ochitha ulwelo ephupheni lakhe uya kwahluka nomntu abagcine kuphela ekunxibelelaneni naye ukuze alunge. Ukuba ulayita iparafini ngelixa ulele okanye uyigalela emlilweni, akufuneki uziphathe ngokungakhathali el mundo Ukuvuka, kodwa ngokuchaseneyo, cinga ngezenzo zakho ngononophelo olukhulu.
Isibane separafini singasetyenziswa njengophawu lokulala. Ukungaqondakali bonisa ebomini balowo uleleyo. Ukuba esi sibane seoyile siyatsha kwaye siyakhanya ephupheni, uya kuba nakho ukumelana kakuhle nezi ngxaki.
Ukucima isibane esinjalo ngeoyile yepetroleum, ngokokuhlalutya ngokubanzi kwamaphupha Ukuphoxeka ngobomi bokuvuka. Izinto ezilindelwe ngabaphuphi ngokuqinisekileyo ngekhe zizaliseke.
Uphawu lwephupha «ioyile» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwephupha kutolika uphawu lwephupha "ioyile" njengophawu lwe phu melela kwaye uqikelela ukuba umphuphi unokufikelela ebomini bakhe bokwenyani.
Umgqomo weparafini xa ulele ungabonisa iinzame zomntu zokugcina ulungelelwano. Ubume bengqondo fikelela. Ukuba ubona ingqayi yeparafini ephupheni, kufuneka ngokubanzi wazi amandla akho, oza kuwadingayo ukuze uphumelele. Isitovu esitshiswa ngeoyile njengephupha sihlala sibonisa imeko yengqondo elungeleleneyo.
Ukuba ilangatye leparafini livutha ngokuqaqambileyo ephupheni, emva koko umntu unokuvuka kwihlabathi elivukayo. iziganeko ezimnandi ndijonge phambili. Nangona kunjalo, ukuba idangatye ligcwele isot, umphuphi unokujongana nentlungu nosizi.
Ukuba uva ivumba leoyile ephupheni, kuya kufuneka ujongane nengqondo namava angathandekiyo engekasetyenzwa ngokupheleleyo.
Isimboli yephupha «Ioyile» - ukutolika kokomoya
Ngaphakathi ekutolikeni amaphupha okomoya, uphawu lwephupha "ioyile" lisetyenziselwa ukubhekisa kwi ukuguquguquka kwengqondo wabaphuphi, ngakumbi kwimicimbi yokomoya.
Ukuba iparafini ibonwa ephupheni ngokunxulumene nepetroli, isibonakaliso se amandla Ingqondo yalowo uleleyo inokuzimela ngasemva kwale meko yamaphupha.
Iphupha malunga nokuhamba